Wasaaradda Haweenka Oo Sheegtay in Sharciga xakameynta gudniinka fircooniga Goordhow la soo saari doono “Sawirro+MUUQAAL” – Radio Muqdisho
Wasaaradda Haweenka Oo Sheegtay in Sharciga xakameynta gudniinka fircooniga Goordhow la soo saari doono “Sawirro+MUUQAAL”
Muqdisho , Isniin, December 01, 2014- Wasaaradda haweenka iyo horrumarinta xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabatay kulan looga arrinsanayay siyaasadda ku aadan wax ka qabashada dhibaatada gudniinka firnoociga uu u leeyahay dumarka Soomaaliyeed.
Kulanka ayaa waxaa ka soo qeyb-galay ku dhowaad 100 qof oo isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo wasaaradda ay dhegeysatay afkaarta ka soo qeybgalayaasha oo dhammaantood isku raacay in gudniinka fircooniga uu dhibaato u leeyahay bulshada.
Wasiirka wasaaradda haweenka iyo horrumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye oo kulanka ka soo qeyb gashay, ayaa ka sheekeysay qorshaha wasaaradda ee wax ka qabashada gudniina fircooniga, iyadoo sheegtay in heerka gudniinka fircooniga ee Soomaaliya lagu qiyaasay 98%,waxaana wasiirka ay xustay in haweenka loo guday gudniinka fircooniga da’dooda ay u dhaxaysay 15-49 sano jir.
Wasiirka Haweenka iyo Horumarinta xuquuqul insaanka Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in kulankaan laga soo saari doono sharci xakameynta gudniinka fircooniga ah kaasi oo dhibaato ku ah Dumarka Soomaaliyeed,iyadoo sheegtay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay ka hortaga gudniinka fircooniga ah
Dhinaca kale, wasaaradda haweenka iyo horrumarinta xuquuqda aadanaha ayaa isla maanta Agaasimaha ololaha ciribtirka gudniinka fircooniga u magacowday Drs. Mina Xasan Maxamed oo horay u aheyd xiriiriyaha wasaaradda haweenka.
Kulanka ayaa socon doonna muddo 2 cisho ah, waxaana maalinta berri ah laga doodi doonnaa sidii loo dhamaystiri lahaa wax ka qabashada dhibaatada gudniinka fircooniga.